New Vision Ministry " Matupi, Rønne, Denmark - Top Local Places
New Vision Ministry " Matupi
Byledsgade7, Rønne, Denmark
ဘုရား အသံကြားတတ်သောသူဖြစ်ဖို့အရောက်စီတိုင်းကို ဝိညဉ်တော်မစကောင်းကြီးပေးပါစေ.....အာမင်
New Vision Ministry " Matupi's cover photo
" ဘုရားပြုသော အမှု့ကိုစောင့်ပါ " တစ်နေ့တော့ ယေရှုဟာသူ့တပည့်တော်များကို ခြေဆေးပေးရာပေတရုသည်နားမလည်၍သခင်ကိုမဆေးပေးရန်တားမြစ်လေ၏ ထိုခါယေရှုကသင်ယခုနားမလည်သော်လဲတစ်နေ့နားလည်လာလိမ့်မည်ဟုရှင်းပြလေ၏ ။ ချစ်မိတ်ဆွေ ...လူတွေဟာ အများအားဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ် တွင် မျက်နှာ နှင့်အပေါ်ယံ အင်္ဂါများ ကိုဦးစားပေးအလေးထားလေ့ရှိတတ် တယ်။ သကယ်တော့ လူ၏ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်ရောက်ချင်သောနေရာ ကိုအရောက်ပို့နေတာ သတိမထားမိသော အလေးမထား မိသော ထိုခြေထောက်ဖြစ်သည်။ ထိုအနိမ်းဆုံး သောနေရာကျန်းမာနေလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ရောက်ချင်သောနေရာသို့ရောက်ရပါသည်။ ဘုရားရှင်ကသင့်ကိုအနိမ့်ဆုံး နေရာမှာ တာဝန်ကျေခိုင်းချင်တာဖြစ်တယ်။ သင့်ဘဝဟာ ဒုက္ခပြဿနာ ကြားထဲ မှာ နားမလည်ခြင်းများစွာ နဲ့ အနိမ့်ဆုံး ရောက်နေပါလိမ့်မယ် ထိုအရာတွေအတွတ် ဘုရား ပြုသောအမှု့ကိုစောင့်ပါ တစ်နေ့ဘုရားပြုသောအမှု့ သည်သင့် အတွတ်အလကား မဖြစ်မှန်းနားလည်လာပါလိမ့်မည်။ ဘုရား သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ .... အာမင်
Please shere ....
*Are you the owner of New Vision Ministry " Matupi?
NEAR New Vision Ministry " Matupi
Bornholms Hospital er hele Bornholms akuthospital. Du er velkommen til at kommentere på opslag, bare det sker i en god tone. Læse mere i "om"
Har du, dit barn eller måske en du kender lyst til at spille fodbold er der plads til alle i Knudsker. Det er muligt at tilmelde sig følgende hold under Knudsker Fodbold: SENIOR, U15, U13, U11, U11 Piger og Fnuggi drenge/piger for de helt små.
http://www.fugleagility.dk/ er et fællesskab hvor vi træner agility sammen med vores fugle og gnavere og tager ud og framviser det(dem der ønsker det)
New customers can now instantly discover and get in touch with places like New Vision Ministry " Matupi in Rønne.
Drop us email on hello@toplocalplaces.com to get exclusive promotion in Rønne area. And special promotion in Studio category in Denmark.
Do you like New Vision Ministry " Matupi ?